Takelaka 8.5 - Geofumed
Jiona, 2012 AutoCAD 2013, Free Courses
Miaraka amin'ny zavatra hitantsika hatreto dia fantatsika fa ny "andalana" andalana ary ny famoronana ireo andinin-tsoratra amin'ny tsipika iray dia asa iray afaka manatanteraka haingana sy mora ao Autocad. Raha ny tena izy dia mila manangana latabatra mora sy haingana, mitambatra, ohatra, tsipika na polyline misy zavatra soratra hamorona ny endriky ny latabatra.
Na izany aza, ny latabatra ao Autocad dia karazana zavatra tsy miankina amin'ny lahatsoratra. Ny tarika "Tables" amin'ny alàlan'ny "Annotate" dia ahafahanao mampiditra latabatra amin'ny sary ataon'i Autocad amin'ny fomba tsotra, satria, rehefa nanomboka ny baiko dia mila mamaritra fotsiny hoe firy ny tsanganana sy firy ny latabatra no hisy, ankoatra ireo tsotra masontsivana. Andao hojerentsika ny fomba fampidirana latabatra sy hamabo data sasany ao.
Miaraka amin'ireo latabatra io dia azo atao ny manao kajy, toy ny fanapariahana Excel, na dia tsy manantena ny fiasan'ny programa rehetra aza ianao. Rehefa misafidy sela, dia mampiseho kitran-kontekstika antsoina hoe "cellule latabatra" miaraka amina safidy mitovy amin'ny toplsheet iray, miaraka amin'ny zavatra hafa, ny antonony, dia afaka mamorona pôlitika izay manao fandidiana fototra amin'ny angon-drakitra latabatra.
Ny raikipohy mba hamintinana soatoavin'ny vondrona latabatra sela dia mitovy amin'izay ampiasaina ao amin'ny Excel, fa manizingizina, no izy fa tsotsotra ny tena dia tsy azo ampiharina ny mampiasa AutoCAD latabatra ho an'ny tanjona ireo. Na izany na tsy izany, dia azo ampiharina bebe kokoa ny rakitrao ao anaty tahadika Excel ary ahafahanao mampifandray azy ireo amin'ny tabilao Autocad. Na dia miova aza ny angon-drakitra ao amin'ny takelaka dia mamela ny fanavaozana ny vaovao ao amin'ny Autocad ny fisian'ny fifandraisana misy eo amin'ny latabatra sy ny taratasy.
Farany, mitovy amin'ny fomba amam-pitaovana, dia afaka mamorona lamaody isika mba hampihatra ny latabatra. Amin'ny teny hafa, dia afaka mamorona napetraka ny fampisehoana endri-javatra toy ny andalana karazana, loko, thicknesses sy ny sisin'ny eo ambanin'ny anarana manokana, ary avy eo mampihatra azy ireo latabatra samihafa. Mazava ho azy fa noho izany dia manana boaty fifanakalozan-kevitra isika izay ahafahantsika mitantana ireo karazana samihafa.
Mazava ho azy fa AutoCAD
Previous Post«Previous 8.4 andalana marika
Next Post TOKO 9: FITSIPIKA NY FANDINIHANAmanaraka »